शङ्कर नेत्रालय! जहाँ हामी जानुपर्‍यो – मझेरी डट कम
चिकित्सकको सल्लाहअनुसार दिदी सरस्वतीको आंँखाको अपरेसनको लागि भारतको पूर्व मद्रास चेन्नाईस्थित शङ्कर नेत्रालय हस्पिटल पुग्नुपर्ने भयो । तुरुन्तै दिदीलाई लिएर भान्जा राजु, मेरी श्रीमती शारदा र म चेन्नाईको लागि प्लेनबाट बङ्गलोर उड्यौँ । ‘आंँखाको अपरेसन नेपालमा नै हुन्छ किन यति टाढासम्म दुःख पाउन आउनुभयो’ भनी यात्रामा सोध्ने अनगिन्ती भेटिए । यी प्रश्न हामीसामु तेर्सिनु स्वभाविकै पनि थियो । हामी पनि रहरले यति टाढा गएका चाहिँ अवश्य थिएनाँै । मधुमेह र मुटुको समेतको बिरामीका लागि आँखाको अपरेसन गर्न प्रशस्त मेसिनको आवश्यकता हुने तर नेपालमा त्यसको अभावका कारण आँखाको अपरेसन गर्दा खतरा आउन सक्ने हुनाले जिम्मेवारी लिन नसकिने डाक्टरको भनाइबाट हामी त्रसित भई यति टाढा पुगेका थियौँ । नत्र हामी किन झन्झट बिसाउँथ्यौंँ र!
जति सक्यो छिटो आँखा हस्पिटल पुग्नु थियो हामीलाई । हामी शङ्कर नेत्रालय पुग्यौँ तर चेन्नाईमा शङ्कर नेत्रालय त चार-पाँच ठाउँमा रहेछ । संयोगवश हामी ठीक ठाउँमा पुगेछौँ । ढुक्क बन्यो मन । बिहान ८ बजेदेखि टिकट काटी जाँच्दा रहेछन् । त्यहाँ जाँचेपछि त्यस ठाउँबाट हस्पिटलकै मोटरमा २५ मिनेटमा अर्को ठाउँमा पुग्याँै । डाक्टरले ‘तपाईं ठीक समयमा आउनुभयो । एक हप्ता मात्र ढिलो गर्नुभएको भए आँंखा काम लाग्दैन थियो । तुरुन्त अपरेसन गर्नुपर्छ । तपाईंहरू तयार हुनुहुन्छ ? भनी सोद्धा हामी झसङ्ग भयौँ । तुरुन्तै एकै स्वरमा ‘हामी तयार छौँ’ भनी जवाफ दियौँ । त्यसोभए टाइम लिनुहोस् भनी पे्रस्त्रिmप्सन लेखिदिनुभयो । हामी अपरेशनको लागि समय लिन अर्को कोठामा गयौँ । तीन दिनपछि अपरेसन हुने थियो ।
खाना खाएर हामी गफ गर्दै, आराम गर्दै थियौँ । आँखाको अपरेसनजस्तो संवेदनशील कुरा के हो, कसो हो एक चोटि नेपालबाट तालिम लिन आएका डाक्टरलाई भेटी सोध्ने निधो गर्‍यौँ र भेट्न गयौँ । ‘आँखाको अपरेसन पर्सि छ कस्तो होला ?’ भनी दिदीले के सोध्नुभएको
थियो । ‘आँखाको अपरेसन मेजर अपरेसन हो । यो अपरेसन निकै गाह्रो हुन्छ । ओपनहार्ट सर्जरीजस्तै हो, जे पनि हुनसक्छ’ भनी डाक्टर फलाक्न थाले । उसको कुरा सुनेर हामी तर्सियौँ । अक्क न बक्क भयाँै । सातो गएको मानिसझैँ हामी लजमा फर्कियौँ । अब अपरेसन गर्ने कि नगर्ने दोधारमा परिरहेका थियाँै । बढो धैर्यका साथ दिदीले भन्नुभयो- “एकचोटि डाक्टर भाइहरू अवनी र श्रृषिलाई टेलिफोन गरेर सोधौँ, उनीहरूले जे भन्छन् त्यहीँ गर्छु ।” दिदीको स्वास्थ्यसम्बन्धी हेरविचार गर्ने उनीहरू नै हुँदा उनीहरूको रायसल्लाह आवश्यक भयो । हामीले तुरुन्त नेपालमा उनीहरूलाई फोेन गर्‍यौँ ।
‘केही हुँदैन, आत्तिनु पर्दैन । अपरेसन गराएर ल्याउनु । चिन्ता नगर्न भन्नु दिदीलाई । त्यस हस्पिटलमा राम्रा-राम्रा डाक्टर छन्, राम्रो अपरेसन हुन्छ । त्यस कारणले धेरै देशका बिरामीहरू त्यहाँ अपरेसन गर्न आउँछन् । देखेनौ विभिन्न देशका मानिसहरू जचाउन आएका ।’ डाक्टरले आश्वस्त पारे । हुन पनि हो विभिन्न देशबाट जचाउन आएकाको भीड देखिन्थ्यो । हामीले उनीहरूले भनेको कुरा दिदीलाई बतायौँ । दिदी ती भाइहरूका कुरामा विश्वास गर्नुहुन्थ्यो ।
निर्धारित समयमा नर्सले अपरेसन कोठामा दिदीलाई लिएर गएको कुरा शारदाबाट थाहा पायौँ । । हामी अपरेसन कोठाको प्रतीक्षाकक्षमा अनेक सकारात्मक नकारात्मक कुरा मनमा खेलाई सोफामा बसिरहेका थियौँ । एक जना कालो अति मोटो सुरक्षागार्ड हाम्रोसामु आएर पास माग्यो । पास एउटा देखायाँै । उसले टु पर्सन प्लिज गो भन्यो । ‘हाम्रो मानिसको अपरेसन छ’ भन्दासमेत केही सिप लागेन । शारदालाई कुरुवा राखी हामी प्रतीक्षा कोठाबाट बाहिर निस्कियौँ । करिब पाँच घण्टापछि दिदीलाई अपरेसन कोठाबाट बाहिर ल्याए । दिदीलाई राखिएको ठाउँमा जानका लागि हामी लिफ्ट चढ्न लाग्दा लिफ्टम्यानले रोके । हाम्रो बिरामी माथि लगेको छभन्दा पास माग्यो । बिरामी कुरुवा एक जना मात्र त्यो पनि पास चाहिँदो रहेछ । जान नदिँदा रिस त उठ्यो तर विवश भयौँ ।